Igumbi elizolileyo kwi-suburbs - I-Airbnb
Igumbi elizolileyo kwi-suburbs
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguKristina
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uKristina iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indawo yamaphupha ochwephesha ohambahambayo!
I-3/2 yenqanaba lokwahlula-hlula ikhaya elinekhitshi ehlaziyiweyo kunye negumbi lokuhlambela. Ubonelelwa ligumbi lokulala labucala elinomabonakude, ibhedi engu-QUEEN yomqamelo, kunye negumbi eligcweleyo. Igumbi lokuhlambela eligcwele labucala elinesinki yomkhumbi, isomisi seenwele sibandakanyiwe. Iindawo zokuhlala ekwabelwana ngazo ziquka; ikhitshi, igumbi lokutyela, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlamba impahla, ipatio kunye neeyadi zombini. Inja yenkonzo yonyango enobubele kakhulu, EKUMKHULU OLONGEZELELWEYO kwikhaya - uxolo, azikho ezinye izilwanyana zasekhaya ezivunyelweyo ngeli xesha.
Igumbi lokulala, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala, igumbi lokutyela, ikhitshi, i-patio, i-driveway, i-foyer, i-closet yengubo / yokugcina, igumbi lokuhlamba impahla, i-yadi yangaphambili nangasemva.
Sihlala sonwabile ukwabelana ngexesha neendwendwe zethu. Siyathanda ukubamba ubusuku bomdlalo kunye nokwenza isidlo kunye nabahlobo, kodwa siyabahlonipha abo bajonge ubumfihlo obungakumbi. Kukuhlala KWAKHO kwaye sifuna ukuba ukhululeke!